Abụ Ọma 91 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 91:1-16
A ga-echebe ndị bi n’ebe zoro ezo nke Chineke
Onye a napụtara n’ọnyà onye na-achụ nta nnụnụ (3)
Ịgbaba n’okpuru nku Chineke (4)
Ọtụtụ puku mmadụ ga-ada, ma ị gaghị ada (7)
E nyere ndị mmụọ ozi iwu ka ha chebe gị (11)
91 Onye ọ bụla nke bi n’ebe zoro ezo nke Onye Kacha Elu+Ga-anọ na ndò nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.+ 2 M ga-asị Jehova: “Ị bụ ebe mgbaba m na ebe m a rụsiri ike.+ Ị bụ Chineke m, onye m tụkwasịrị obi.”+ 3 N’ihi na Chineke ga-anapụta gị n’ọnyà nke onye na-achụ nta nnụnụ siri,Napụtakwa gị n’ajọ ọrịa na-efe efe. 4 Ọ ga-eji nku ya kpuchie* gị,Nku ya ga-abụkwara gị ebe mgbaba.+ Eziokwu ya+ ga na-echebe gị otú nnukwu ọta+ na mgbidi siri ike si echebe mmadụ. 5 Ị gaghị atụ ihe ọ bụla egwu n’abalị,+Ị gaghịkwa atụ akụ́ a gbapụrụ n’ehihie egwu,+ 6 Ị gaghịkwa atụ egwu ọrịa nke na-efe ndị mmadụ n’abalịMa ọ bụ ihe na-egbu ndị mmadụ n’etiti ehihie. 7 Otu puku mmadụ ga-ada n’akụkụ gị,Puku mmadụ iri ga-adakwa n’aka nri gị,Ma ihe ọjọọ ndị a agaghị eme gị.+ 8 Ọ bụ naanị anya ka ị ga na-eleMgbe ị ga-ahụ ka a na-ata ndị ajọ omume ahụhụ.* 9 Ebe ọ bụ na ị sịrị: “Jehova bụ ebe mgbaba m.” I jirila Onye Kacha Elu mere ebe gị a rụsiri ike;*+ 10 E nweghị ọdachi ga-adakwasị gị,+E nweghịkwa ihe ọjọọ ga-abịa nso n’ụlọikwuu gị. 11 N’ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya+ iwu banyere gị,Ka ha na-eche gị nche n’ebe ọ bụla ị na-aga.+ 12 Ha ga-eji aka ha ghọrọ gị,+Ka ị ghara ịkpọ ụkwụ na nkume.+ 13 Ị ga-azọ ọdụm na agwọ ubí ụkwụ. Ị ga-azọpịa nnukwu ọdụm na nnukwu agwọ.+ 14 Chineke sịrị: “Ebe ọ bụ na ọ hụrụ m n’anya, m ga-anapụta ya.+ M ga-echebe ya maka na ọ ma aha m.+ 15 Ọ ga-akpọ m, m ga-azakwa ya.+ M ga-anọnyere ya n’oge ọ na-ata ahụhụ.+ M ga-anapụta ya ma mee ka ọ dị ebube. 16 M ga-eme ka ọ dị ogologo ndụ,+M ga-emekwa ka ọ hụ otú m ga-esi azọpụta ya.”+
^ Ma ọ bụ “chebe.”
^ Na Hibru, “ụgwọ a na-akwụ ndị ajọ omume.”
^ Ma ọ bụ “ebe mgbaba.”
Abụ Ọma 91